Ekwentị Vivo ọzọ nwere batrị 5000 mAh apụtawo | Gam akporosis
vivo Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-etinyekarị ngwaọrụ kachasị na ndekọ nke TENAA, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị China nke ga-ere ahịa niile ga-ere na China n'oge na-adịghị anya. Ma, ka ị ghara ịlafu omume ahụ, ugbu a, o deela ebumnuche ọzọ na ngalaba nke ngalaba na-achịkwa usoro a.
O yiri ka onye nrụpụta China na-ezube itinye ọtụtụ ụdị nke smartphones na ahịa nwere nnukwu batrị. Na anyị na-ekwu nke a n'ihi na-adịbeghị anya na nmepe ya ekpughere na iQOO Pro 5G - flagship nke Vivo sub-brand - ga-enwe batrị 4,500 mAh na a ihe omimi Vivo ngwaọrụ Ejiri batrị 5,000 mAh wepụtara ya.
Ọnụ anyị na-ekwu maka ugbu a emeela ka ọ pụta na ndepụta TENAA Ana m ebi V1930A / T. Nke a gosipụtara na a kwadebere ya na ntanetị nke 6.358 nke anụ ọhịa ahụ nwere akara ngosi mmiri na mkpebi HD + nke pikselụ 1,544 x 720. Ihe onyonyo TENAA gosipụtara ekwentị na acha anụnụ anụnụ, mana ndepụta ahụ na-egosi na ọ ga-abịakwa na ọla edo.
Ngwaọrụ ahụ dị ka etiti, ebe eji ngwaọrụ mkpanaka arụ ya 1.95 GHz octa-isi nhazi, ebe nchekwa RAM 3 GB na oghere nchekwa 64 GB dị n'ime yana nkwado maka mgbasawanye site na kaadị microSD. OS nke na-agba ọsọ bụ A gam akporo, ebe batrị na-eme ka ọ rụọ ọrụ bụ 5,000 mAh, ọ bụ ezie na ọ nweghị nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Na akuku aka ekpe nke ngwaọrụ a ihe nkpado igwefoto abuo na-agbakwunye site na oku LED. Nke a gụnyere a 13 megapixel isi lens nke ejikọtara na ihe mmetụta 2 megapixel, mgbe anyị nọ n'ihu anyị na-ahụ ihe mmetụta na mkpebi 8 MP. E wezụga nke ahụ, ọ dịghị ihe a maara banyere ụbọchị mwepụta nke ekwentị a, nnweta ya na ahịa na aha azụmahịa ọ ga-enwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ekwentị Vivo ọzọ na-edebanye aha na nchekwa data TENAA na batrị 5000 mAh
Nseta ihuenyo nke Vivo Nex 3 na-egosi na ọ nwere nkwado maka njikọta 5G